Scalloped nduku Ntụziaka - Ezi Ntụziaka
ihe esi nri na ọkụkọ na dumplings
jiri nwayọ na-esi nri osi nri bali na ero
esi mejupụta ncha dispenser mgbapụta
ị nwere ike ifriizi broccoli cheese ofe
Scalloped nduku Ntụziaka
Scalloped nduku bụ mfe kpochapụwo uzommeputa, zuru okè n'ihi na gị Ista nri abalị, Christmas, Inye ekele ma ọ bụ ọbụna nanị Sunday nri abalị.
N'ime efere a, a na-etinye poteto na eyịm dị iberibe n'ime ihendori ure ụlọ ma sie ya ruo mgbe ọ ga-adị nro, ọla edo, na afụfụ. Nduku zuru okè!
anụ ezi ude cheese tinye na ritz crackers
Omuma di nfe
Niile nduku akụkụ efere si Ikwú asara n'ọkụ Nduku ka Zuru oke poteto , ọ dịghị ihe na-ekwu nkasi obi nri dị ka creamy n'akụkụ nke scalloped poteto (ma e wezụga ma eleghị anya creamy buttery gwere poteto ).
Ya mere, olee kpọmkwem ihe nduku skalloped? Echere na ọ malitere n'England, okwu ahụ bụ 'scallop' bụ n'ụzọ bụ isi nkọwa maka etu esi egbue poteto. A na-etinye ụyọkọ bekee dị larịị ma na-ejikọ ya na efere akpati wee kpuchie ya na ude mmiri ude mmiri. Nsonaazụ a bụ savory scalloped nduku uzommeputa!
Nduku Yukon gold poteto (ma ọ bụ poteto uhie) nwere anụ dị nro ma ọ chọghị ịkpụcha (ha na-ejide ọdịdị ha nke ọma). Ruset poteto ma ọ bụ Idaho poteto ga-arụ ọrụ mana ọ na-agbasasị karịa (mana ọ ka dị mma).
Eyịm Eyịm tinye a otutu ekpomeekpo a Ntụziaka na a kpochapụwo mgwa. Iberi nnọọ mkpa.
Ude ihendori Achịcha ude ngwa ngwa ejiri ntụ ọka, bọta, mmiri ara ehi na ofe. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbakwunye chiiz, wepụ ihendori site na ọkụ wee kpoo aka ma ọ bụ abụọ nke cheese shred. Ọ ga-agbaze si okpomọkụ nke ihendori.
Mmemme Oge dị mfe na nhazi a gụnyere nnu, ose, yabasị, galik. Tinye na ọkacha mmasị gị gụnyere thyme, rosemary, pasili.
Otu esi eme nduku skalloped
Ime scalloped poteto site ọkọ na-ewe oge mana ọ dị mfe. Ezie na ezi scalloped poteto enweghị cheese, anyị na-mgbe ụfọdụ tinye ntakịrị na!
Thinly iberi nduku & eyịm.
Mee ihe eji eme ụlọ (Ntụziaka n'okpuru)
Nduku poteto, eyịm na ihendori. Kpuchie ma mee achịcha.
Wepu foil ma ghee ya ntakịrị, nzọụkwụ a na -emepụta aja aja na-atọ ụtọ n’elu nduku scalloped
D MKPA Cool 20 nkeji tupu ị na-eje ozi iji kwe ka ihendori ahụ too.
Ndụmọdụ zuru oke maka nduku skalloped
Iberi nduku evenly iji hụ na skalloped poteto esi nri evenly
Jiri a mandolin iji mee ka ọrụ a gbalite ọsọ ọsọ (a $ 25 mandoline dị ka nke a na-arụ nnukwu ọrụ ma na-azọpụta gị oge dị ukwuu)
.B. ginger bụ ntọala maka a creamy ihendori . A roux pụtara nanị isi nri abụba (na nke a butter) na ntụ ọka ma gbakwunye mmiri mmiri iji mee ihendori!
Ọ bụrụ na ị kpebie tinye chiiz na ihendori (nke ga-eme ka ndị a ghọọ Nduku Au Gratin ) Wepu ihendori si na stovu ma bido na iko 1 1/2 na 2 cheese (cheddar / gruyere bu oke ochicho).
Oge poteto na nnu na ose n'etiti n'ígwé.
Kpuchie ya na foil mgbe o na-eme nri, nke a na-enye ya ohere igwu mmiri na ike nduku na obere ọsọ.
Iji mee nduku skalloped n'ihu oge
Iji mee nke a tupu oge eruo (ma na-esi nri ngwa ngwa n'ụbọchị ije ozi), anyị anwalela ụfọdụ na-esi nri ha na nnukwu nsonaazụ.
Ime efere kpuchie maka 50-60 nkeji.
Wepu si oven na dị jụụ kpamkpam na tebụl (hapụ ha ka ha kpuchie, uzuoku ga-enyere aka rụchaa nri).
Kpuchie nke ọma na friji .
N'ụbọchị ije ozi, wepu friji ma ọ dịkarịa ala minit 30 tupu ị ghee. Kpuchie ihe dị ka nkeji 35 ma ọ bụ ruo mgbe iwe dị ọkụ.
Nri Ezi ntụziaka ndị ị ga-ahụ n'anya
Ugboro abụọ Nduku - Mee n'ihu & ifriizi!
Mfe Mpekere Nduku Nduku
Akwado achịcha Nduku - Nnukwu maka ndị fọdụrụ afọdụ.
Ugboro abụọ Mkpụrụ Nduku Casserole
Cheesy Ham na Nduku Casserole
Nri Nduku ofe - Nri abalị izu
4,94site naOgbe 773votu NyochaNtụziaka
Oge Nkwadebe25 Nkeji Oge nri1 aka elekere iri abụọ Nkeji Oge ezumikeiri na ise Nkeji Oge zuru ezu1 aka elekere Anọ Nkeji Ọrụ6 servings Onye edemedeHolly Nilsson Scalloped nduku bụ zuru okè nduku casserole! Obi nduku na creamy yabasị ihendori butere ka ọlaedo zuo okè. Bipute Ntụtụ
▢¼ iko bọta
▢¼ iko ntụ ọka
▢abụọ iko mmiri ara
▢1 iko ọkụkọ efere
▢3 paụnd ọcha nduku sliced ​​banyere ⅛ 'nnukwu
▢nnu na ose nụrụ ụtọ
Kpochapu oven na 350˚F.
Iji mee ihendori, gbazee bọta, yabasị na galik n’elu obere ọkụ. Esi nri ruo mgbe eyịm ga-eyịm, ihe dị ka nkeji atọ. Tinye ntụ ọka ma sie nri ruo minit 1-2.
Belata okpomọkụ ka ọ dị ala. Ikpokọta mmiri ara ehi na efere. Tinye obere ego n'otu oge whisking ka thicken. Ngwakọta ahụ ga-adị oke oke, gaa n'ihu na-agbakwunye ntakịrị mmiri mmiri n'otu oge ruo mgbe ọ ga-eji ire ụtọ.
Ozugbo agbakwunyere mmiri mmiri niile, weta obụpde karịa ọkara ọkụ mgbe ị na-aga n'ihu na-agba ume. Nwuo na nnu na ose ka obụpde 1 nkeji.
Ghee efere nri 9'x13. Ebe ⅓ nduku na ala na oge na nnu na ose. Wunye ⅓ ude ihendori ihendori n’elu.
Tinyegharịa oyi akwa na-ejedebe na ude ihendori. Kpuchie ya akpọọ nkụ maka minit 45.
Kpughee ma mee ihe maka nkeji 35-45 ọzọ ma ọ bụ ruo mgbe aja aja aja na poteto dị nro. Debe maka nkeji 3-4 iji nweta ọla edo n’elu.
Kwe ka o zuo ike maka nkeji iri na ise tupu ị jee ozi.
Calorisị:Ogbe 286,Carbohydrates:39g,Protein:9g,Abụba:iri na otug,Abụba Ajuju:7g,Cholesterol:30mg,Sodium:484mg,Potassium:Ogbe 1122mg,Eriri:6g,Sugar:5g,Vitamin A:465IU,Vitamin C:30.8mg,Calcium:Ogbe 179mg,Iron:7.7mg
Isiokwuskalloped nduku N'ezieSide efere Esie yaOnye AmericaEnd SpendWithPennies.com. Ọdịnaya na foto bụ ihe nwebisiinka. Kekọrịta nke uzommeputa a gbara ume ma nwee ekele. A machibidoro ibipụta na / ma ọ bụ ịzigharị usoro nri zuru oke na mgbasa ozi ọhaneze. Biko lee iwu ojiji iji foto m ebe a .
Kedu ihe dị iche na nduku Scalloped na Au Gratin?
Nduku au Gratin na-akpọ cheesy poteto n'ihi na-acha ọcha ihendori bụ n'ezie a cheese ihendori (na ha mgbe chiiz fesa n'etiti n'ígwé na / ma ọ bụ breadcrumb topping).
Nke a nwere ike (n'ezie) tinye ya na chiiz ma ọ bụ tinye cheese ma mana mgbe ụfọdụ enwere m mmasị n'ịdị mfe na nhazi a na-enweghị chiiz. Sweettọ nke eyịm na mmiri ara ehi bụ ezigbo ihe mgbakwunye na poteto ndị a ịkpụ!
Nwere ike ifriizi nduku skalloped?
Nduku a ga - edobe n’ime ngwa nju oyi maka ihe dị ka ụbọchị 4 ma ghaa ọfụma na ngwa ndakwa nri, oven ma ọ bụ n’ime ite eghere eghe! Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịkpụkọta ha ogologo oge, ee, skalloped poteto nwere ike ịjụ oyi!
jiri nwayọ osi ite philly cheese ibe anụ itinye
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ efere ọ bụla a na-etinye n'ọkụ nwere ike ịjụ oyi zuru oke site na obere etu esi ama. Ọ bụrụ na ị na-eme nri friza, ụzọ kachasị mma iji kpoo poteto a na-achachapu bụ na ị gaghị esi nri ya n'ụzọ zuru oke, mana hapụ ha obere obere. Ekem, ke ndondo oro mmọ ẹnamde n̄kpọ ke ekebe ntụhube, sio mmọ ke usụn̄ emi afo oyomde ndikụre nyụn̄ tịm kpeme mbemiso esịnde ke ekebe ntụhube. Iji kpoo, kpoo ma mechaa nri ruo mgbe poteto dị nro ọzọ!
Ọ bụ ezie na nke ahụ bụ nhọrọ dị mma, ọtụtụ mgbe anyị na-achọ ifriifọ ndị fọrọ afọ. N'okwu a, poteto ndị a na - acha nke ọma na-agbaze nke ọma, ọ bụ ezie na achọpụtara m na ha na - agbagha ntakịrị oge mgbe a na - emegharị ọkụ mana ha ka na - atọ ezigbo ụtọ!
Gbanyụọ Casantrole a